एक्सपोमा दर्शकको आगमन सकारात्मक छ : दामु अधिकारी – Shuva News
एक्सपोमा दर्शकको आगमन सकारात्मक छ : दामु अधिकारी
Shuvanews १६ मंसिर २०७५, आईतवार December 2, 2018 443 Views
पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा पोखरा प्रदर्शनी केन्द्र नयाँबजारमा मंसिर १३ गतेदेखि सफल एक्सपो पोखरा जारी छ । एक्सपोमा औद्योगिक तथा व्ययवसायिक उत्पादन राखिएका छन् भने विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरिएको छ । एक्सपोका विषयमा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी ।
महोत्सव तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा यहाँले कस्तो पाउनुभएको छ ?
पहिलो दिन समुद्घाटनको दिन हो । जुन दिनमा मध्यान्हमा औपचारिक कार्यक्रम भएको थियो । त्यस दिनमा दर्शकहरु भन्दा पनि उद्योग बाणिज्य संघलाई माया गर्ने र निम्ता गरिएका पाहुनाहरुको सहभागिता थियो । उद्घाटनपछिका दिनमा क्रमशः दर्शकहरुको चाप बढ्दो छ । दर्शकको आगमनमा भइरहेको बृद्धिलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । महानुभावहरु आउने क्रम बढ्दो छ, उनीहरुले आफन्तहरुलाई भनेपछि अवश्य पनि दर्शकको संख्यामा बृद्धि हुनेछ ।
राष्ट्रिय व्यापार मेलाको नाम परिवर्तन भएपछि अलिकति दर्शकलाई अलमल भयो भन्ने छ नि ?
म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले ३ दशकदेखि मेला महोत्सव गर्दै आएको हो । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले विगतमा पनि नामहरु परिवर्तन गर्दै आएको थियो । ०६३ सालदेखि गतबर्षसम्म राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको नाममा आयोजना गरेका थियौं । आजको दिनमा पोखरामा थुप्रै संघ संस्थाले मेला महोत्सव गर्दै आएका छन् ।
मेला भनेर जानेभन्दा अलि परिष्कृत रुपमा जान र संघीयता मर्मअनुसार आफ्नो दायरा कायम गर्न पनि एक्सपोका रुपमा आयोजना गरेका हौं । सफल ब्राण्डले मेला वा एक्सपो सफल बनाउनका लागि प्रायोजन गरेको हो । मेला भन्ने वित्तिकै परम्परागत मेलाका रुपमा बुझ्न थालेका छन् । उद्योग बाणिज्य संघले गर्ने मेलामा त औद्योगिक उत्पादन वा ट्रेड फेयरका रुपमा जानुपर्ने हो ।
अहिले हाम्रो सामथ्र्य ट्रेड फेयर गर्न सक्ने हिसावले नभएकाले एक्सपो नामाकंरकण गरेका हौं । यसका साथै मोबाइल वितरक संघ कास्कीको सहकार्यमा तेस्रो मोबाइल मेलालाई जोडेका हौं । विगतकै राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको परिष्कृत रुप एक्सपो हो भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । दर्शकहरुको सल्लाह सुझावले कार्यक्रमलाई थप राम्रो र व्यवस्थित बनाउँदै लैजानेछौं ।
गतसाल त बम्पर उपहार कार नै राख्नुभएको थियो तर यसपटक हटाउनुभयो नि ?
गतसाल कार उपहार राख्दा दर्शक बढ्छ कि भन्ने सोचेर राखेका थियौं । हामीले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन पनि गरेका थियौं । दर्शकले अलि धेरै जनालाई समेटे हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तो सुझावलाई ध्यान दिएर यसपटक बम्पर उपहारका रुपमा स्कुटर राखेका छौं भने डोर प्राइज आर्कषक बनाएका छौं । जस्तो दोस्रो दिनको डोर प्राइज फ्रि रहेको छ । दर्शकले घरमा सदुयोग गर्न मिल्ने सामग्री हरेक दिन प्रदान गर्ने प्रत्यन्न गरेका छौं । मेला जुध्नु एउटा संयोग मात्रै थियो । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गर्ने महत्वपूर्ण इभेन्ट मंसिरमा नै हो ।
यसपटकको एक्सपोको विशेष आर्कषण के हो ?
दर्शक महानुभावलाई के अनुरोध छ भने विगतमा भन्दा केही फरक विषय एक्सपोमा समावेश छन् । विगतमा औद्योगिक उत्पादन कम मात्र समावेश थिए । यस बर्ष इन्डष्ट्रियल पेभिलियन राखेका छौं जसमा पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका मेसीनरी उत्पादनहरुबारे हेर्न र बुझ्न सकिन्छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि जुन सहयोगी हुन सक्छ ।
यसका साथै पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी त हो नै विस्तारै पर्यटनको पनि राजधानी बन्दैछ । तर पर्यटनको राजधानी बनाउनका लागि लेकसाइड र पोखराका केही स्थानलाई मात्र समावेश गरेर पुग्दैन । यसर्थ पोखरा आसपासका क्षेत्रलाई ग्रामीण पर्यटनलाई पनि सँगै लैजानुपर्दछ । घरबास पर्यटन, ग्रामीण जनजीवनको बारेमा जानकारी दिने प्रयत्न एक्सपोमा गरिएको छ । बाख्राको खोर, घुमाउने घर, मकैको सुली लगायतका विषय समावेश छ । यसर्थ एक्सपो हर्न र आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनुहोला ।